‘अटेर गरिए राजधानीमा पनि निषेधाज्ञा’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — उपत्यकामा पछिल्ला दिनहरुमा कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि उपत्यकाभित्रका सरकारी/निजी र गैरसरकारी संघसंस्था सञ्चालनमा नयाँ मापदण्ड बनाइने भएको छ ।
बिहीबारदेखि यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालसँग कान्तिपुरका लागि मातृका दाहालले गरेको कुराकानी :
उपत्यकाको जोरबिजोर प्रणाली कार्यान्वयनमा कत्तिको चुनौती छ ?
जोरबिजोर लागू गर्नुको मूल उद्देश्य नै अत्यावश्यकबाहेकका सवारी नगुडुन्, अत्यावश्यक कामबिना अनावश्यक मोबिलिटी कसैको नहोस् भनेर हो । भीडभाडले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्यो । विगतमा पनि यो प्रावधान लागू गरेकै हो । तर यसपटक परिस्थिति फरक छ, सावधानी आफ्नै लागि हो भनेर नागरिकले पनि सोचिदिनुपर्‍यो । सुरक्षा निकाय, कर्मचारी जसरी खटिएका छन् र आम नागरिक पनि उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्छ ।
आवागमन र सवारीसम्बन्धी पछिल्लोपटक जारी गरिएको निर्देशन लकडाउनकै रूप हो कि फरक ?
लकडाउनकै रूप नभनौं, जोरबिजोर प्रावधान गाडीको मोबिलिटीमा ‘सटडाउन’ चाहिँ हो । राति ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सबै सवारी आवागमन निषेध गरिएको छ । लकडाउन खुलेपछि रात्रिकालीन आवागमन ह्वात्तै बढेको पाइयो । यसले समाजमा संक्रमण फैलिने जोखिम देखायो । होटल/रेस्टुराँमा मापदण्ड उल्लंघन गरेको देखियो त्यसैले रात्रिकालीन आवागमन अनिश्चितकालका लागि रोकिएको हो ।
जोरबिजोर लागू गर्दा संक्रमण घट्छ त ?
संक्रमितको चापले उपचार गर्ने अस्पताल भरिएका छन्, परीक्षण गर्ने व्यक्ति जोखिम र प्राथमिकता हेर्नुपर्ने स्थिति छ । कम्तीमा संक्रमणबाट मुक्त रहेका मानिसले सावधानी अपनाउने हो भने त कोरोना सर्दैन नि । केही समय बिनाकाम बाहिर ननिस्कँदैमा आकाश खस्दैन । निस्कनै परे स्वास्थ्य मापदण्डको ख्याल गर्नुपर्छ । अरूका लागि होइन, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुस् भनेर नागरिककै लागि जोरबिजोर लागू गरेका हौं ।
कोरोना जोखिमका कारण उपत्यकाबाहिर एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा छ, काठमाडौंमा पनि त्यस्तो तयारी छ ?
निषेधाज्ञा, कफ्र्यु वा दंगाग्रस्त क्षेत्र परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने स्थिति भयो भने मात्रै जारी गरिन्छ । लकडाउन हटाउँदा नै सरकारले यस्तो परिस्थितिमा स्थानीय प्रशासन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग र जिल्लाको स्थिति हेरेर आवश्यक कदम चाल्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै दिएको छ । आवश्यक देखिए र जोरबिजोर पालनामा पनि अटेर गरियो भने निषेधाज्ञामै जान सक्छौं ।
‘पहुँचवाला’ लाई निर्बाध ओहोरदोहोर गर्न दिइयो भन्ने आरोप छ नि ?
अत्यावश्यक सेवा प्रवाह र सरकारी तथा मानवीय सहायतासम्बन्धी काममा खटिएकाको हकमा हामीले सहजीकरण गरेका छौं । मृत्युसंस्कार, सुत्केरी, बिरामी तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर अनुमति लिएकालाई पनि आवतजावतमा सहजीकरण गरिएको छ । तर संकटमा २४ सै घण्टा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्रसेवकको मनोबल गिर्ने गरी कसैले पनि आरोप लगाउनु हुँदैन ।
आफूले भनेअनुसार हिँडडुल गर्न पाइएन भनेर आरोप लगाउने प्रवृत्ति छ । संकटका बेला लगातार सडकमा ८ घण्टासम्म उभिएर खटिएका सुरक्षाकर्मी र दिनरात नभनी कार्यालयमा बसेर काम गरिरहेका राष्ट्रसेवकले जान–अन्जानमा रुखो बोली बोले वा नियम पालना गरेर आउनुस् भन्दा आरोप लगाए, यो सही होइन ।
प्रकाशित : श्रावण २३, २०७७ ०८:१९
काठमाडौँ — काठमाडौंको चाबहिलमा मादक पदार्थ सेवन गरी श्रीमती र छोरीमाथि स्प्रिट छ्याप्ने एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
बिहीबार साँझ मादक पदार्थ सेवन गरेर श्रीमती र छोरीमाथि स्प्रिट छ्याप्ने अन्दाजी ४४ वर्षीय राजन विष्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
विष्टले बिहीबार साँझ ९ बजेतिर श्रीमती र छोरीमाथि स्प्रिट छ्यापेको काठमाडौं प्रहरी परिसरले जनाएको छ । विष्टलाई अहिले महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धको हिरासतमा राखिएको छ । पीडितलाई अहिले उपचारका लागि तिलगंगा अस्पताल लगिएको प्रहरीले बताएको छ ।
टाउको र अनुहारमा स्प्रिट परे पनि आँखाको ज्योतिमा असर नपरेको चिकित्सकको भनाइ उद्धृत गर्दै काठमाडौं प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी श्यामलाल ज्ञवालीले जानकारी दिए । विष्टले मादक पदार्थ सेवन गरी सधैं झगडा गर्ने गरेको पनि खुल्न आएको उनले बताए ।
प्रकाशित : श्रावण २२, २०७७ २२:४०